Gummi: nyanzvi yeLaTeX mupepeti weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Muchikamu chino tinopa imwe yeakanakisa vanyori zvichibva paLaTeX iyo iriko yeGNU / Linux. Ndezve Gummi, mupepeti unove unobatsira kwazvo kubhuku uye vanyori vemanyorerwo vanoshandisa aya marudzi ezvishandiso uye vari kushandisa Linux.
Ehe zviripo zvimwe dzimwe nzira dzakawanda, senge Texmaker, TeXlipse, nezvimwe, asi zvirokwazvo Gummi yakanaka kwazvo uye inonzwisisika. Vanyori zvirokwazvo vanofara kushandisa chishandiso chine simba kuvabatsira kugadzira mabasa avo zvinehunyanzvi.
ari LaTeX vapepeti Iwo akajeka mavara edhisheni akagadzirirwa kugadzira sainzi uye ehunyanzvi mabhuku / zvinyorwa, sezvaungave uchitoziva. Zvese zvekutenda kuTeX macros uye kuburikidza nekushandisa mutauro wechirongwa wakanangana nerudzi urwu rwekushandisa.
Gummi ari GTK + kushanda Inomhanya paLinux, kunyange paine vhezheni yeWindows. Iyo inotibvumidza isu mukana wekuve neLaTeX mupepeti iyo inogona kushanda nePDF, kuisa magirafu, mafomula, maneja edu ekunyora mapurojekiti, matemplate, mabhuku ebhaibheri, nezvimwe. Inowanikwa pasi peMIT rezinesi, ndeye mahara, yakanyorwa mumutauro weC uye inoitwa mumitauro yakati wandei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Gummi: chishandiso cheLaTeX chenharaunda dzeLinux nevanyori